Ahoana ny fomba hanamboarana lisitry ny lisitry ny tranonkalan'ny PR?
Ny tetik'asa rehetra napetraka an-tserasera dia mila tetikady ara-barotra matanjaka mba hamantaran'ny pejy voalohany na faharoa. Ny tetikady fanatsarana ny fikarohana rehetra dia mitaky karazan-drakitra maro isan-karazany. Raha jerena ny vaovao farany farany Google dia mila hatsaran-tarehy ireo rohy ireo ary avy amin'ny tranokalan'ny PR - hospedagem site joomla. Ireo rindran-damina hafa rehetra dia heverina ho ambany kalitao sy spammy. Izany no mahatonga ny webmaster rehetra mila mitandrina loatra momba ny kalitaon'ny backlinks izay manangana ny kalitaon'ny rohy miditra izay mamaritra ny toerana hipetrahan'ny tranonkala ao anaty motera fikarohana amin'ny fehezanteny manan-danja manokana.
Noho izany, ny fanontaniana dia ny fomba hamoronana lisitry ny lisitry ny lisitry ny lahatsoratry ny PR raha tsy mandany vola be sy ezaka?
Raha ny fijerena ny tranokala fanatsarana ny milina fikarohana, ny fitsipika 4 V dia miasa tsara indrindra:
Ny isan'ny rohy izay manondro ny loharanon'ny tranonkala. Mbola misy vokany eo amin'ny fananana. Na izany aza, mila mitadidy ianao fa maro ny backlinks avy amin'ny tranonkala spammy, dia tsy hanome tombony anao izany.
Ny karazana loharano ampiasainao amin'ny tanjona fanorenana rohy. Ambonin'izany, tsara kokoa raha asehon'i Google ny habetsaky ny tranonkala manintona ny sehatra misy anao ho marim-pototra sy rohy voamarina.
Ny haingam-pifandraisana azonao amin'ny rohy. Google dia mety ahiahiana raha hanangana backlinks maro isaky ny alina. Raha tokony ho izany dia tokony hamorona rohy mahazatra ny rohy tsy tapaka amin'ny fototra.
Ny lahatsoratra an-tsoratra amin'ny rohy mankany amin'ny site. Ity lahatsoratra ity dia tokony hatao tsara, manangona ary ahitana ny iray amin'ny fikarohana voalazanao.
Ny lisitr'ireo tranonkala avo lenta amin'ny fananganana backlinks
Ny tranonkala manaraka dia ny toerana fanombohana tsara ho an'ny fanentanana backlink:
Ity sehatra sosialy avoitra PageRank ity izay manome ny tompona tranokala miaraka amin'ny fahafaha-manao fampiroboroboana ara-barotra maro. Ny iray amin'ireo sehatra an'ity sehatra ity dia ny hoe "tsy manaraka" ny politikan'ny fananganana trano. Midika izany fa ny rindran-tsavily azo avy amin'ny Facebook dia tsy handefa jiosy mifandraika amin'ny faritra misy anao. Na izany aza, ny rindran-damba avy amin'ity loharano ity dia mety hahatonga ny mombamomba anao ho azo itokisana kokoa sy azo ekena kokoa eo imason'i Google.
Tranonkala PR9 izay an'ny Google. Izy no manome ny webmasters miaraka amin'ny backlinks dofollow sy nofollow. Azonao atao ny manangana backlinks dofollow ao amin'ny profil momba ny orinasa na ny famaritana video. Ny rohy hafa rehetra dia nofolo. Ny vaovao tsara dia ny ahafahanao mamadika ny fantsona YouTube anao ho PR5 tokana ho an'ny backlink PR6. Mety hisy vokany tsara eo amin'ny toerana misy anao izany.
Google+ dia loharano web PR8. Valiny Google ao amin'ny Facebook izany. Eto ianao dia afaka mamorona farafaharatsiny dofollow iray ao amin'ny tranokalanao. Fotoana tsara ho an'ny fampitomboana ny lisitra misy anao satria ampiasain'i Google ity sehatra ity ho ampahany amin'ny algorithm. Izany no antony maha-manan-danja ny famoronana pejy Google+ izay ahitana lahatsoratra fanoratana miaraka amin'ny fehezan-kendrena tianao hotadiavina ao amin'ny faritra / momba ny faritra.